Last Updated on Wednesday, 15 August 2012 03:18
एकल पहिचानमा आधारित संघीयता नमान्नेलाई मोर्चाले पाखा लगाउने
सरकारको नेतृत्व गरिरहेको एकिकृत माओवादीको नेतृत्वमा एकल पहिचान सहितको संघीयता पक्षधरहरुको मोर्चा बनाउने काम अन्तिम अवस्थामा पुगेको छ । माओवादी नेतृत्वमा बन्न लागेको मोर्चामा ठूला साना गरि २६ दल सहभागि छन् । संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चा नाम दिइएको उक्त मोर्चाले आगामी बुधवार औपचानिक रुप पाउने छ । सोमबार प्रधानमन्त्री कार्यालयमा मोर्चाको बैठक बसी मोर्चा निर्माणका लागि वृहत भेला गर्ने समेत निर्णय गरेको छ । गत बिहीवार २१ दलले गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, संघीयता सहितको राज्यको पुनःसंरचनालाई संस्थागत गर्न मोर्चा बनाउने निर्णय गरेका थिए । सोमबारको वैठकमा मोर्चाको विधान, कार्यविधि लगायतका विषयमा समेत छलफल भएको एक नेताले बताए । मोर्चाले संविधानसभाको अन्त्य गराउने तत्व र नयाँ संविधानको विरोधी उपर भण्डारफोर गरि देशलाई निकास दिन सहकार्य गरि अगाडि बढ्ने समेत निर्णय गरेको छ । एकल पहिचान सहितको संघीयतामा सहमति जुटेमा मात्र संविधानसभाको पुनःस्थापनाको विकल्प मोर्चाले खुल्ला राखेको छ । मोर्चा आगामी संविधानसभाको निर्वाचनसम्म कायम रहने समेत बताइएको छ । एकल पहिचान सहितको संघीयतामा विमति राख्दै आएका एमाले र नेपाली कांग्रेसलाई यो मोर्चाले दहरो गरि पाखा लगाउँने धेरैको अनुमान छ । राजनीतिक संकट गहिरिरहेका बेला भएको मोर्चा बन्दीले सहमतिको बातावरण बनाएर राजनीतिक निकास निकाल्ने भन्दा अझ दलीय धुव्रीकरण बढाउने निश्चित छ । मोर्चामा एमाले र कांग्रेस बाहेक सबै दललाई समावेश गराउन पहल गर्ने समेत बुझिएको छ । तर माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको नेतृत्वमा बन्ने मोर्चा भर्खरै नयाँ शक्ति निर्माणको क्रममा जुटेका आदिवासी तथा जनजातिहरुलाई समेत सहभागि बनाएर अगाडि बढ्छ वा बढ्दैन अहिले नै भन्न गाह्रो छ ।
Last Updated on Tuesday, 14 August 2012 01:49
Last Updated on Friday, 10 August 2012 07:25
वाहुनहरुको हिन्दु पार्टी बन्ने
दलित र जनजातिलाई अधिकार बिहिन बनाउने उद्देश्यले वाहुनहरुले हिन्दु पार्टी बनाउने भएका छन् । उनीहरुले हिन्दू राष्ट्र स्थापना गर्न भन्दै अब अर्को पार्टी गठन गर्न लागेका हुन ।
नेपाललाई धर्म सापेक्ष हिन्दू राष्ट्र बनाउन चाहनेहरुको काठमाण्डूमा भएको भेलाले, पछि पार्टी बनाउने गरी धर्म सापेक्ष अखण्ड राष्ट्र बनाउने उद्देश्य सहित सनातन लोकतान्त्रिक परिषद् गठन गरेको छ । ‘नयाँ शक्तिका रुपमा नैतिकता, सदाचार र धर्म संस्कृतिको उत्थानमा केन्द्रीत’ हुने संस्थाले घोषणा गरेको छ ।
संस्था अहिले विचार समूहका रुपमा रहेको र पछि यो पार्टीकै रुपमा अघि बढ्ने संगठन संयोजक लोकराज पौडेलले जानकारी दिनुभयो । तर हिन्दू राज्य स्थापना आफ्नो उद्देश्य भएपनि राष्ट्रप्रमुख निर्वाचित हुनुपर्ने बताए ।
परिषद्को उद्देश्यमा सहमत हुनेहरुको सञ्जाल बनाएर राष्ट्रिय सम्मेलन गर्न प्राध्यापक डाक्टर माधव भट्टराईको अध्यक्षतामा मूल समिति गठन भएको छ । समितिमा लोकराज पौडेल, अधिवक्ता प्रकाश कुमार चापागाइँ, सन्तोष वशिष्ठ, डाक्टर सहदेव बिष्ट, डाक्टर अनन्तहरि आचार्य, केशवराज धिताल लगायत सदस्य छन् । समितिका एक सदस्यका अनुसार आदिवासी जनजाति, दलित, मुस्लिम, मधेशीलाई अधिकार दिन नहुने पार्टीको मुख्य उद्देश्य हो ।
Last Updated on Monday, 13 August 2012 01:51
अशोक राईले नेतृत्व गर्ने गरि सामाजिक लोकतान्त्रिक बहुल राष्ट्रिय पार्टी घोषणा
राजधानीमा विश्व आदिवासी दिवसको अवसरमा आदिवासी तथा जनजातिको अगुवाइँमा नयाँ राजनीतिक पार्टी घोषणा भएको छ । घोषित पार्टीको प्रस्तावित नाम सामाजिक लोकतान्त्रिक बहुल – राष्ट्रिय पार्टी रहेको छ । त्रिपुरेश्वर स्थित बल्र्ड ट्रेड सेन्टरमा आयोजित पार्टी घोषणा कार्यक्रममा पार्टीको घोषणा पत्र प्रा. डा. कृण्ण भट्टचनले पढेर सुनाएका थिए । पार्टीको नेतृत्वमा को भन्ने स्पष्ट नभए पनि आगामी असोज महिनामा एमालेका उपाध्यक्ष अशोक राई र कांग्रेसका इन्द्र बहादुर गुरुङले गर्ने स्रोतले बताएको छ ।
घोषणा पत्रमा एकल बाहुनवाद र सामान्तवादको चक्रलाई चिदै पहिचानको मुद्धा र जातीय अग्राधिकार स्थापित गदै र पिछडिएका बर्गको एक मात्र शसक्क्त पार्टी बन्ने उल्लेख छ । जातीय लैगिक र क्षेत्रिय तथा राष्ट्रियताको मुद्धालाई नयाँ पार्टीले शसक्क्त रुपमा उठाउँने घोषणा पत्र सार्वजनिक गदै डा. कृण्ण भट्टचनले बताए । जेठ १४ मा पहिचानमा आधारित संघीयतामा ठूला दल कांग्रेस र एमाले पछि हटे पछि ती पार्टीका जनजाति नेताहरुले पहिचानको मुद्धालाई ठूला पार्टीले उठाउँन नसक्ने ठहर गदै नयाँ शक्तिको आवश्यकता औल्याएका थिए । त्यस लगतै काठमाडौमा गत असार २० र २१ गते आयोजना गरेको आदिवासी जनजातिको राजनीतिक सम्मेलनले राजनीतिक अवधारणा पत्र सार्वजनिक गदै नयाँ पार्टी खोल्ने निष्कर्ष निकालेको थियो । एमाले र कांग्रेसमा असन्तुष्ट आदिवासी जनजाति नेताहरु नयाँ पार्टी खोल्ने बताउँदै आएको भए पनि अहिले खोलिएको नयाँ पार्टीमा उनीहरुको अनुहार देखिन्न । एमालेका पृथ्वी सुब्वा गुरुङ, कांग्रेसका इन्द्र बहादुर गुरुङ लगायत पार्टीको घोषणा पत्र सार्वजनिक कार्यक्रममा उपस्थित नै भएनन् । त्यस्तै एमालेका मधेशी नेता रामचन्द्र झा पनि देखिएनन् । जनजातिहरुको लागि नयाँ पार्टीको आवश्यकता परेको बताउँदै आएका आदिवासी जनजाति महासंघका अध्यक्ष राजकुमार लेखीले पार्टी घोषणा कार्यक्रममा मुन्टो लुकाए । पार्टी घोषणामा जनजाति नेताहरु बीच नै विवाद भएको भन्ने प्रचार आए गरि पनि त्यस्तो नभएको र बरु आफू पार्टी छोडेर अहिलै नयाँ पार्टीमा समाहित हुन नमिल्ने लेखीले प्रष्ट्याए । जनजाति नेताहरुमा पार्टी खोल्ने विषयमा बाहिर आएको कुरा सत्य नभएको र जनजाति नेताहरु बीच कुनै मतभिन्नता नरहेको नयाँ पार्टीमा आवद्ध आङकाजी शेर्पाले बताए । नयाँ पार्टीको कार्यदलमा बौद्धिक र राजनीतिका निकै सुझबुझ डा. कृष्ण भट्टचन, डा. महेन्द्र लावती, डा. चैतन्य सुब्वा जस्ता मानिसहरुको संलग्नाले नयाँ पार्टीले सही मार्ग दर्शन पाउँनेमा धेरै आशावादी छन् । पार्टी घोषणा गर्ने कार्यक्रममा धेरै जनजाति समुदायका प्रतिनिधिहरु उत्साहित देखिन्थे । तर विगतमा जनजातिको नामबाट खोलिएका २४ वटा पार्टी असफल भैसकेको पृष्ठभूमीमा खोलिएको प्रस्तावित सामाजिक लोकतान्त्रिक बहुल राष्ट्रिय पार्टी घोषणा पत्र अनुरुप कसरी सबै जनजातिलाई समेट्छ र राजनीतिमा स्थापित बनेर शक्तिशाली दलमा दरिन्छ भन्ने आगामी यात्राले नै तय गर्ने छ ।
Last Updated on Thursday, 09 August 2012 11:22
संयुक्त राष्ट्रसंघको महासचिव वानक की–मूनको सन्देश
भृकुटीमण्डप जाऔ १८ औ विश्व आदिवासी दिवस मनाऊ
आदिवासी जनजातिद्धारा गठित पार्टीको नाम सामाजिक लोकतान्त्रिक बहुल राष्ट्रिय पार्टी
नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार संघ (अनिज) को १३ बुदे काठमाडौं घोषणापत्र–२०६९’ जारी